MYU SHADAN: အကြမ်းဖက်အထိကရုံန်း လက်သယ် ဘယ်သူလဲ?
ကဲအောင်သောင်း တို့ အောင်မင်းတို့ A
ငြင်းနိုင်ရင် ငြင်းစမ်း အမှန်တွေ ဖေါ်လိုက်ပြီ
ဗိုလ်သန်းရွှေ ဗိုလ်မောင်အေးတို့မဆင်းခင်လေး ရှုပ်ထား ယုတ်ထားသမျှ ကျနော့ဆီ အရောက်ပေးပို့လာကြသော တပ်မတော် အရာရှိကလေးများကိုတော့ အားနာသည်။ သို့သော် အမှန်တရားအတွက် ကျနော်ဖေါ်ကောင်လုပ်ပေးတော့မည်။
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ၂လခွဲတင်းတင်းလောက်လိုသော ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ဂျင်ဝက်အား ဗိုလ်သန်းရွေက ၂ နာရီကြာမျှတွေ့ဆုံပြီး အသေးစိတ်ချပြကာ ၄င်းလိုချင်သော အခြေနေအား နားချသည်။ တဖက်မှလဲတရုတ်ပြည်နှင့် နားလည်မှုရအောင် Lion Share ဟုခေါ်သော စီမံကိန်းကြီးများဖြင့် မက်လုံးပေးထားသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာ ကြွေးမြည်အား တရုတ်မှ ဆပ်ပေးမည်မဟုတ်သကဲ့သို့ ပိတ်ဆို့မှုများဖြင့် တင်းကြပ်နေသော မြန်မာ စစ်အစိုးရက ဂျင်ဝက်ဆိုသော အမေရိကန်ဆီးနိတ်အမတ်အား ငါးစာလုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ငါးပွက်အိုင်ကြီးထဲသို့ ပစ်ချခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အရူးကြီးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ခဲ့ပြီးသော ဂျင်ဝက်က တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှ နိုင်ငံတော် အချုပ်အိမ်စံ တပင်တိုင် အတိုက်ခံသမားကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်သွားတွေ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဒေါသလျော့ဖို့နှင့် ဥာဏ်ကျယ်ကျယ်ဖြင့်စဉ်းစားဖို့ ဂျင်ဝက်က တိုက်တွန်းသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဥပဒေဘောင်အတွင်းထဲမှ နိုင်ငံရေးနှင့် မိမိယုံကြည်ချက်ကို လုပ်ကိုင်ရန် ဂျင်ဝက်က မေတ္တာရပ်ခံသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂျင်ဝက်တို့ ဆွေးနွေးပွဲ အခြေတော်တော်မလှပဲ ရုတ်သိမ်းခဲ့ရသည်။
(အမေရိကန်သံရုံးမှ၎င်းနိုင်ငံခြားရေးဌာနသို့ ပေးပို့သော သတင်းအား ၀ီကီလိက ဖေါက်သယ် ပြန်ချခဲ့သည်)။
ဂျင်ဝက် ပြန်သွားသောအခါ တရုတ်သံရုံးမှ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးကောင်စီသို့ တရုတ်ပြည်မှ သံစာ တစောင် ပေးပို့သည်။ ၄င်းစာပါအရ ဗိုလ်သန်းရွှေနှင့် အခြားသော စစ်အရာရှိများ ဂျင်ဝက်နှင့် ဆွေးနွေးထားသောကိစ္စများအား အင်္ဂလိပ်သို့ ဘာသာပြန်အဖြစ် တရုတ်က တောင်းခံခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဗိုလ်သန်းရွှေလုပ်သမျှ ဘောလိုက်မနေသော မင်းအောင်လှိုင်(ယခု ကာချုပ်)မှ အားလုံးတရုတ်ပြည်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများအတွက် လိုလေသေးမရှိလုပ်ပေးသည်။ ထိုအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင် (ယခု ထောင်ဒဏ် ၁၅နှစ် သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်) က တရုတ်အား မိမိတို့၏ နိုင်ငံတကာ သံတမန်ကိစ္စများ အသိပေးတင်ပြရမည်မှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့မှုကြောင့် ဗိုလ်သန်းရွှေမှ မျက်မုန်းကျိုးသွားခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါ၇ီလတွင် ဗိုလ်ချုပ်မြင်အောင်အား ၄င်း၏ အောက်လက် အရာ၇ှိဖြစ်သူ ယခု အာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ညွန်ကြားမှုအောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်၇န် ဗိုလ်သန်းရွှေမှညွန်ကြားမှုအား လက်မခံနိုင်ဖြစ်ပြီး ဆင်ခြေပေးထောက်ပြမိရာမှ ထောင်နန်းစံသူအဖြစ်သို့ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရ၏။ အကြောင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မြင်အောင်သည် တရုတ်ပြည်အား မြန်မာ အစိုရမှ အလုံးစုံကြောက်၇ွံ့မှီခိုအားထားနေမှုအား တပ်မှူးများ၏ အစည်းဝေးအချို့တွင် မကြာခဏ ထောက်ပြလေ့ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
တရုတ်ပြည်မှ ပိုပြီးယုံကြည်မှုရစေ၇န်နှင့် မိမိအား အကာကွယ်ပေးရန် ဗိုလ်သန်းရွှေအပါဝင် စစ်ဝန်ကြီးများနှင့် တကွ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း၇ှင် ခရိုနီများဖြင့် စက်တင်ဘာလ (ရ)ရက်နေခင်း ၁၀ နာရီတွင စိတ်ကောက်တော်မူနေသော တရုတ်သမ္မတ ဟူချင်တောင်းနှင်ပ တွေ့ဆုံပြီး ၄င်းပြုလုပ်ထားသော ဗျူဟာ များအား အသေးစိတ် တင်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော် သတင်းဌာနများနှင့် သံတမန်ရပ်ကွက်များတွင် ကုန်သွယ်ရေးနှင်ပ ရွေးကောက်ပွဲများအကြောင်းကို သာ ကူညီဆောင်ရွက် လက်တွဲဖို့၇ှိကြောင်း တင်ပြထားခဲ့သည်။ (China lauds 'friendly' Myanmar as junta leader arrives By Dan Martin (AFP) – Sep 7, 2010) ဆောင်းပါးကို ပြန်လည် ဖတ်ရှု့နိုင်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ သံတမန်များမှတဆင့် နိုင်ငံတကာသို့ သံချောင်းခေါက်ကာ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့၏ ရွှေးကောက်ပွဲအတွက် စည်းရုံးပေးခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ကလည်း တရုတ်တို့ဘက်သို့ Lion Share အားလုံးအားပေးသည့် အနေဖြင့် မြစ်ဆုံရေကာတာနှင့် လက်ပံတောင်းစီမံကိန်းအပါဝင် စီမံကိန်းအကြီးစားပေါင်း ၁၂၄ ခု ပေးခဲ့သည်။ထို့အပြင် မြစ်ဆုံဒေသ လုံခြုံရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုဖြစ်သော ကချင်တိုင်းရင်းသားများအား အမြစ်လှန်ဖယ်၇ှားရေးကိုပါ ၀န်ခံကတိပြုခဲ့သည်ကို သက်သေအထောက်ထားတိကျစွာ စာရေးသူထံတွင် လက်ဝယ်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကပင် တရုတ်တို့နှင့် သဘောတူခဲ့သော နှစ် ၅၀ ကြာ စာချုပ်ဖြင့် ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသမှ ရှည်လျားကွေးကောက်သော ဂစ်ပိုက်လိုင်းကြီး၏ လုံခြုံရေးသည် အလွန်အရေးပါသော အခြေနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွှေးကောက်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားသည့်နောက် တရုတ်စီးပွားရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအား ထိကပါးရိကပါး အခြေနေသို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သော မြစ်ဆုံရေကာတာ ဖြစ်သော အမြင့်ပေ ၄၅၈ ရှိပြီး အလျားပေ ၄၂၉၇ပေးခွဲရှိသည့် ရေကာတာကြီးအား မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးမှ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြကြရာမှ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေဖြင့် လူထု ယုံကြည်မှုအား ၄င်းမှ တည်ဆောက်ပြရန်အလို့ဌာ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ နေခင်း ၁၁ နာ၇ီတွင် ကြေငြာချုက်ထုတ်ခဲ့သည်ကို တရုတ်ပြည်အစိုးရ အထင်မမှားစေရန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် အား တရုတ်ပြည်သို့ အောက်တိုဘာလ တွင်စေလွှတ်တောင်းပန်ခိုင်းကာ နှစ်သိမ့်မှုလုပ်ခဲ့ရ၏။
အပိုင်း(၂)အား မနက်ဖြန် မတ်လ ၂၇ ရက်တွင် ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်။
ဦးအောင်သောင်းတို့ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးတမန်တော်ကြီးအဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဂျွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ စစ်ဘက်မှ ကေအိုင်ကေတို့ နေရာယူထားသော တာပိန် ရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားစက်ရုံတည်ရှိရာသို့ သွားသော လမ်းကြောင်းမှ ဖယ်ရှားရန် တရုတ်ပြည်အစိုးရအား ကတိပေးထားသည့်အတိုင်း ကေအိုင်အေနှင်ရ ၁၇ နှစ်ကြာချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်အား စစ်ပွဲဖြင့် စတင်ပျက်ပြယ်စေခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်အား ပြန်လည်ငြိမ်းအေးရန် ကြံ့ဖွတ်နဲ့ ဦးအောင်သောင်းတို့ လုပ်လာကြသည်။ ထိုတာပိန်ေ၇အားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် တရုတ်ပြည်မှ အင်ဂျင်နီယာ ၉၀ ရာနုံန်းဖြင့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး ယူနန်ပြည်နယ် မီးလင်းရေးကို ဦးတည်ထားသော စက်ရုံဖြစ်သည့်အတွက် တရုတ်အစိုးရ၏ အထောက်ပံများ မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနောက်တွင် ရှိနေကြောင်း နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှ သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် အတိလင်း ရေးသားထောက်ပြထားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ၇က် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စစ်ပွဲကြောင့် ဒုက္ခသယ်အရေး နိုင်ငံတကာသို့ ပုံပွလာသောအခါ ဦးအောင်သောင်း နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်းဇော်နှင့် ယခု ဦးအောင်မင်းတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်၇န် ရွှေလီတွင် ကေအိုင်ကေ အကြီးကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြောင်းကို နိုင်ငံတကာသို့ လော်ဘီလုပ် ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နေ့ရက်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှအမိန့်ဖြင့် ကချင်ဒေသ သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေအတွင်းရှိ တပ်၇င်းတပ်ဖွဲ့များအား စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအား ၇ပ်တန့်ထားကြောင်း မြန်မာ့ အလင်း သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြပြီး နိုင်ငံတကာ စစ်ရေး အကဲခတ်များအား ဗြောင်လိမ်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖားကန့်ဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ အပြင်းထန် ဖြစ်နေသောကြောင့် ဆိုနိုင်သည်။
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မည်ဟု လေလုံးထွားခဲ့သော ၀န်ကြီးများ အရှက်ကွဲပြီး မြားဦးလှည့်လာသည်မှာ ၇ခိုင်ဒေသ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြသနာ စတင်ရန် ၀န်ကြီးလက်သယ်အချို့ အာရုံစိုက်ခဲ့ရသော အကြောင်းရင်ခံတခု အခိုင်မာ တင်ပြရသော် ရခိုင်ပြည်နယ်သားများ၏ အခွင့်ရေးအရ ခံစားပိုင်ခွင့်အား ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် (ကျောက်ဖြူမြို့နယ်) ဒေါက်တာအေးမောင် (၇ခိုင် အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီဥက္ကဌ) နှင့် ဦးဘရှင်တို့ မှ ဇန်နာဝရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် နာရီစင်ရှိ၇ာနေရာသို့ လူထုအစည်းဝေးခေါ်ယူကာ ရခိုင်ပြည်သူများအား ရခိုင်ပြည်မှ ထွက်ရှိသော သံယံဇာတများအတွက် ခံစားခွင့်ရှိကြောင်းကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် မည်သို့ ပြဌာန်းထားကြောင်းကို စုရုံးခွင့် ရရှိသော လူထု ၅၀၀ အား ပြောကြားခဲ့သည်က စလာသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ Aye Maung said the main aim of holding the public conference is to mobilize the local Arakanese people as well as their brethren of other ethnic nationalities for their wider participation in making demands on the gas project for the development of Arakan State.
The regional election commission granted permission on 27 December for the RNDP to hold the public conference, which is scheduled from5pm to 11 pm on 1 January at the clock-tower grounds in Kyaukpru. It was learned that only 500 people are allowed to take part in the conference, and six senior leaders of the party, including Dr. Aye Maung and U Ba Shin, the legislator from People’s Parliament in Kyaukpru, will speak at the conference. http://www.narinjara.com/main/index.php/colonial-era-explotation-should-be-avoid-dr-.
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်လွတ်ခါနီ အချိန်လေးမှာပင် အမေရိကန်အစိုးရမှ နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ သံတမန်ကြီး ၂ ကြိမ်နှင့် အာရှရေးဆိုင်ရာ သံတမန်ကြီး တို့ ၁ကြိမ် သွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့် ရသော အခြေနေအား ဗိုလ်သန်းရွှေတို့မှ ဖန်တီးကာ မက်လုံးပေးခဲ့သည်။ ဒေါ်စုလွတ်လာသောအခါဝယ် လက်ရှိ ၂၀၀၈ ဥပေးလမ်းကြောင်းမှပင် လျောက်လှမ်းစေရန် သံတမန်ကြီးများကလည်း ပထမဦးဆုံး သံခင်းစတင်ရေးသယ်ယူလာသော ဂျင်ဝက်ကဲ့သို့ပင် အခင်းကျင်းအထောက်ပံ့များ ပြုလုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးကြသည်ကို နေပြည်တော်မှ သဘောတော်ကျနေခဲ့ကြ၏။ ထိုကာလတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွသော အသွင်များသာ ရှေ့တန်းရောက်ရှိနေပြီး တိုင်းပြည်တခုလုံး အလွန်သာယာသော အခင်းကျင်း ကြီးသဖွယ် တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ကျောက်နီမှော်ရွာသားများမှ ပြသနာတစုံတရာ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပဲ သက်ဆိုင်ရာ၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုသာ မျှော်လင့်နေခဲ့သည်။ ၂၉ ရက်နေ့ မေလတွင် မသီတာထွေးအား မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်သူများဟူ ယူဆရသူ ၃ဦးအား မောင်းတော ရဲစခန်း၏ ညွန်ကြားချက်ဖြင့် လာရောက်စစ်ဆေးကြောင်း သတင်းလွှင့်ပြီး ကျောက်နီမှော် ရယက ရုံးတွင်ပင် အကျဉ်းရုံးစစ်ဆေးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ၄င်းနေရာတွင် စောင့်ကြည့်နေကြသော ၇ခိုင်အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဒေါသအိုးကို ပိုပြီး ပေါက်ကွဲလာအောင် ဒုရဲမှူး လှအေးမောင်က ဖန်တီးပြခဲ့၏။
မေလ ၃၀ ရက်တွင် ရခိုင် အမျိုးသားများ မကြေနပ်သံကျယ်လောင်ပြီး အုံးထနေသောကြောင့် ကျောက်နီမှော် ရယကမှ ရဲသို့ အကြောင်းကြားကာ အဆိုပါတရာခံ ၃ ဦးအား လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားစေခဲ့ပြီး ရမ်းဗြဲရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်မှာ သမာရိုးကျ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဟုတ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ထိုနောက် မှတ်ပုံတင်များတဦးခြင်းစစ်ဆေးပြီး အဆိုပါ မူဆလင် ၁၀ဦးနှင့် အခြားရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၄ ဦးကိုသာ ကာပေါ်ပြန်တက်ခွင့်ပြုပြီး ကားထွက်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ တောင်ကုတ်ကားဂိတ်တွင် မြန်မာ အမျိုးသား ၆ဦးနှင့် ရခိုင်းအမျိုးသမီး ၅ ဦးကျန်နေရစ်သည်။ မူဆလင်၁၀ ဦးတွင် ပါလာသော လက်ကိုင်ဖုန်း၃လုံးးအား ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားမှု အထောက်ထား မခိုင်လုံဟု ဆိုကာ နဆကမှ သိမ်းယူထားလိုက်သည်။
တောင်ဂုတ် ကားဂိတ်မှ ကားစထွက်ပြီး ကိုက် ၃၀၀ လောက်မှာပင် ဆိုင်ကယ်စီးလူတအုပ်က ၄င်းကားအား တားဆီးပြီး ကားပေါ်တက်ကာ သတ်ဖြတ်နေသည်ကို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသော တောင်ကုတ် ကားဂိတ်မှ လှမ်းမြင်နေကြသော နဆက နှင့် ရဲဝန်ထမ်းများ တုပ်တုပ်မျှမလှုပ်လှမ်းကြည့်နေခဲ့ကြသည်ဟု တောင်ကုတ်ကားဂိတ်တွင် ဆင်းကျန်ရစ်ခြင်းခံရသော ခရီးသယ်က ဖေါက်သယ်ချပါသည်။
၄င်းအမှုခင်းဖြစ်ပွားလာသည်နှင့် ပိုပြီး မီးတောက်ကြီးမားလာအောင်နေ့စဉ်ထုတ်အစိုးရ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ ဂျွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်အရေးခင်းအား အသေးစိတ်ရေးသားဖေါ်ပြထားပေးပြီး မီးလောင်ရာ လေပင့်ပေးသည့်အနေဖြင် ထပ်ပြီး ကြီးထွားအောင် သတင်းစာ တွင် စကားလုံး အသုံးနုံန်းများအား ခက်ခက်ထန်ထန်လုပ်ပေးလိုက်ကြ၏။
ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့များတွင် ကြီးမားသော ရန်ပွဲများဆထက်တံပိုးကြီးမားခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး ဂျွန်လ ၈ ရက်နှေ့ညမှ စတင်ကာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေး ပုဒ်မ ၁၄၄ အား တမြို့ပြီးတမြို့ ထုတ်ပြကာ လက်နက်ကိုင် စစ်တပ်များအား ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ပထမဆုံး နယ်မြေစိုးမိုးရေးအဖြစ်ထိုးသွင်းခဲ့၏။
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များအထဲတွင် အတွေးခေါ် အားနည်းသော ၊ ဘာသာတရားအား တရားဟောဆရာ မော်လီဆပ်များမှ ပြောသောစကားများကိုသာယုံကြည်သော မြို့ပေါ်မှ မူဆလင်အချို့များ နှင့် မြန်မာပြည်အားနည်းပေါင်းစုံဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျမှ ခိုးဝင်လာသော ယခုခေါ်ဆိုနေကြသော ရိုဟင်ဂျာများအဖို့ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မြန်မာပြည်မအတွင်း အများစုကိုးကွယ်ကြသော ဗုဒ္ဒဘာသာအား လိုက်လျောညီထွေသွာ ဆက်ဆံပြုမူနေထိုင်မှု မရှိကြသောကြောင့် အဆိုပါ ဘာသာနှစ်ခုအကြားတွင် ကသိကအောင့်လေးလုပ်ပေးလိုက်သည်နှင့် ယမ်းပုံမီးကျ ပေါက်ကွဲတတ်ကြောင်း ကြံ့ဖွတ်အမတ်များက သိကြလေသည်။
ဦးသိန်းစိန် (သမ္မတ) မှ တက်တက်လာခြင်း အပြောကောင်းကောင်း နွဲ့နွဲ့ကလေးဖြင့် ပြောချလာလိုက်သည်မှာ ကောင်းမွန်သော အစိုးရ၊ သန့်ရှင်းသော အစိုးရစကားလုံးမိန့်ခွန်းများအတွက် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် ရှေ့နေကြီး ဦးသိန်းညွန့်မှ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သော ၂၀၁၂ ခုနှစ်မတ်လသည်နေပြည်တော်တွင်းအတွင်းကြိတ်ပုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးနေသာ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ တွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေငြာပြီး ကာလမှပင် ဖြစ်ပွားလာသော ကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုသမ္မတ ဦးတင်အောင်မြစ်ဦးသည် ၄င်း အတွင်းရေးမှုး(၁) နအဖတွင် လုပ်ခဲ့သောကာလတွင် မြစ်ဆုံတည်ဆောက်ရေးအတွက် တရုတ်ပြည်မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ဒသမ ၆ ဘီလီယန် တန်ဘိုး ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်နိုင်၇န် ကြားပွဲစားကြီးလုပ်ခဲ့သော အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ အား မြက်မြက်ကလေး အိပ်ထဲ ထည့်လိုက်သည့်အပြင် စာချုပ်စတင်ချုပ်ဆိုသော အချိန်တွင် ဧည့်သယ်ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ အား တရုတ်ပြည်တွင် ကောင်စစ်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ယူနေသော ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သားမက် ကို ပေးခဲ့သည့် အတွက် ပြန်လည် လျော်ပေးရမည့်အခြေနေသို့ ဆိုက်ရောက်လာ၏။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ သင်္ကြန်ပြီးသွားသော ကာလ အစိုးရရုံးများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သောကာလတွင် ဒုသမ္မတ ၄င်၏ ဒုသမ္မတ အစိုးရရုံးဆိုင်ရာ ရုံးခန်းသို့ မလာတော့ပဲ မေလဆန်းတွင် နုတ်ထွက်စာ ပေးပို့ခဲ့၏။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမှ သင်္ကြန်အတက်နေ့တွင် ဦးသိန်းစိန်အား ခေါ်ယူကာ သြ၀ါဒပေးပြီး တရုတ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ရှေ့တွင် အနှောက်ယှက်မရှိအောင် သယ်ဆောင်သွားရန်နှင့် လက်ရှိ တင်ရှိနေသော နိုင်ငံတကာအကြွေးများအား အကြေလည် အပြီးပြတ် ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်ဟု တာဝန် အပြီးပြတ်ယူခိုင်းသည်မှာ ဦးသိန်းစိန် ငြင်းချက် ထုတ်နိုင်ပါမည်လော။
ဦးသိန်းစိန်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေ သင်္ကြန်အတက်နေ့ အမိန့်အား ရင်ဝယ်ပိုက်ခဲ့၏။ သို့သော် မေလ ၅ ရက်တွင် ရေးသားသော The Guardian က အတိကျ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နုတ်ထွက်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားခဲ့သော်ငြား သမ္မတရုံးမှ စင်္ကာပူတွင် ဆေးသွားကုနေသယောင် တရားဝင်မဟုတ်ပဲ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပျံလွင့်ခဲ့သည်။နောက်ပိုင်းမှ အတည်ပြုပေးခဲ့၏။
စက်တင်ဘာလ၂၀၁၂ခုနှစ်သည် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့တခုလုံး နိုင်ငံတကာသို့ ခြေဆန့်သော ကာလဟုဆိုနိုင်ပြီး ဗိုလ်သန်းရွှေအားပေးထားသောဂတိအတိုင်း နိုင်ငံတကာ အကြွေးပေါင်းစုံ ပယ်ပျက်ရေး အသဲသန် အားထုတ်ကြသော ကာလကြီး ဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ ရခိုင်နယ်စပ်တွင် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား အကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေသော ကာလလဲဖြစ်၏။
၁၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှလဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန် ဒီစီတွင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအား ပယ်ဖျက်ပေးရန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟယ်လာရီကလင်တန်အား တောင်းဆိုနေခဲ့ပြီး New York Time နှင့် Washington Post သတင်းစာ၏ ၁၉ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အကြီးကျယ်ရေးသားတင်ထားသည်။ ထိုနောက် ဦးသိန်းစိန်တို့ ကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ဘီလီယံကျော် လျော်ပစ်ရေးအတွက် လမ်းကြောင်း တည့်သွားကြပြီး ၄င်းငွေအားလုံး ပြန်ဆပ်စရာမလိုတော့ပဲ ယနေ့ ဦးပိုင်အိတ်ထဲသို့ လျောကနဲ့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ရသည်။
အောက်တိုဘာလတွင် အိုအိုင်စီမှ မြန်မာပြည်ထဲဝင်ရန် အပြင်ဆင်များလုပ်လာသောအခါ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မှ ရခိုင်ပြည်ဒေ သ၏ မကြေမချမ်းဖြစ်သံများအား နိုင်ငံတွင်းပြင် သတင်းသမားများအတွင် လွတ်လပ်စွာ ရိုက်နှိပ်ဖေါ်ပြခွင့်ပေးပြီး အိုအိုင်စီ ကန့်ကွက်ရေးအား စိုင်းပြင်းခွင့်ပြုကာ အောက်တိုဘာလ ၁၄၊ ၁၅ ရက် ၂၀၀၁၂ ခုနှစ် အကြီးကျယ် အိုအိုင်စီ ၀င်ရောက်မှုအား ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေသောပုံရိပ်များ နှင့် အနေထားအားထောက်ပြကာ အိုအိုင်စီအား ပြန်ဖယ်ထုတ်ပြသော ကစားကွက်ကို ခင်းခဲ့ကြ၏။
သြဂုတ်လ ၃ ရက်ကနေ လက်ပံတောင်းဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ အရှိန်မြင့်လာလေတော့ ဦးရွှေမန်း က ပုဒ်မ (၁၈) နှင့် ပုဒ်မ (၅၀၅) ခ ကို လွှတ်တော် မှာ ထပ်ပြီး သိသာမြင်သာဖို့ ထပ်မံအဆိုတင်သွင်းပြီး ပိုခိုင်မာအောင်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဦးအောင်မင်းတို့ လက်ပံတောင်းသို့ ရောက်သွားသော ကာလ မတိုင်ခင်တွင် စီမံကိန်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေအဖြစ်သိမ်းယူထားသော အရာများအား ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်သူ ပါဝင်သူ ဦးဆောင်သူတွေအားလုံးအား ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ဖမ်းဆီးကာ တရားရုံးတွင် အနဲဆုံး ဒဏ်ငွေ ၁၀ သိန်းမှ သိန်း ၅၀ အထိ ချမှတ်ရန် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများသို့ လျှို့ဝှက်ညွန်ကြားခိုင်းပြီး နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား မွဲပြာကျသွားအောင် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ကိုကိုအား လွှတ်တော် ဥက္က ဦးရွှေမန်းနှင့် ငြိမ်းပွဲစားကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဦးအောင်မင်း ၏ အချိန်းချက်နှင့် နေပြည်တော်၏ (…) ရိပ်သာတွင် ည ၉ နာရီမှ ည ၁၁း ၃၀ ထိ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။ ထိုကြောင့် လက်ပံတောင်း ပွဲနှင့် ပတ်သက်သော ကိုအောင်စိုး ဒေါ်နော်အုံးလှတို့ မည်မျှ အာမခံကြေးပေးဆောင်ရသည်ကို မေးမြန်းလျှင် အဖြေပိုရှင်းသွားပေလိမ့်မည်။
မြစ်ဆုံးကိစ္စသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ရိုးရှင်းပြတ်သားသော ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပဲ ကစားကွက်တခုသာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အနောက်အုပ်စုများ၏ သဘောကျမှုကို ပထမဆုံးရယူရန်လုပ်ခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဆိုရှယ်လစ် နေစဉ်သတင်း ၀က်ဆိုက်က အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် လက်ပံတောင်းကတော့ ငယ်ထိပ်မြွေပေါက်ခံရမည်ကို စိုးသောကြောင့် နိုင်ငံတော်က ပါဝင်ပတ်သက်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု (State of Terrorism) အား ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ထင်း၇ှားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အကာကွယ်ယူ ရှောင်ထွက်ခဲ့ကြသည်မှာ ငြင်းချက်ထုတ်စရာ လိုလောက်မည်ဟု မထင်မိပါ။
ဒီဇင်ဘာလ ရ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ရှေ့တန်းစခန်းနှင့် ကချင်ဒေသ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များသို့ မြန်မာ့ကာကွယ်ရေးရုံးချုပ်မှအစီစဉ်ကြီးတခုအခိုင်မာချမှတ်လိုက်သော အစီစဉ်ကြီးတခု ကြောက်ခမန်းလိလိထွက်လာသည်။
အကြောင်းမှာ ကချင်ဒေသ စစ်ဆင်ရေးသည် ၁၉ လကျော်ရောက်လာပြီး မည်သည့်နယ်မြေတခုမှ အမိအရ သိမ်းယူနိုင်မှု မရှိပဲ ဖြစ်ရကာ လက်ပံတောင်းဖြိုခွင်းမှုတွင် ပါ အရှက်ဟက်တက်ကွဲရသောကြောင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ အတွင်း ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲများ အပြီးသတ် ဆင်နွဲပြီး ဇန်နာဝရီလ ၄ ရက်နေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့အား ကချင်ပြည်နယ် လှိုင်ဇာမြို့ တွင် ကျင်းပမည်ဟု ဖေါ်ပြပါရှိသည်။
ထိုကြောင့် ၈၈ ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ မှ လှိုင်ဇာတွင် ကေအိုင်အေ ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်နှင့် တွေ့ဆုံအပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ခြေလျှင်တပ်၊ အမြောက်တပ်နှင့် ဝေဟင် စစ်ဆင်ရေးတို့အား ပုံအောအသုံးပြုတိုက်ခိုက်စေပြီး ကချင်ဒေသ အမိရ ဆုပ်ကိုင်မိအောင် ကြိုးစာသော်ငြား မင်းအောင်လှိုင်တို့အဖို့ အချဉ်းနှီးဖြစ်ရပြီး နောက်ဆုံး နိုင်ငံတကာမှ ကျယ်လောင်သော စစ်ပွဲရပ်တန့်ရေး သတင်းများသာလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံး စစ်ပွဲသတင်းများအား ကာကွယ်ရေ ၀န်ကြီးဌာနမှချပေးသလောက်ကိုသာ ပြောခွင့်ရသော သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မှူးဇော် အား ပြောရေးဆိုခွင့် ရာထူးမှ ပြန်ကြားရေးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဌ်၏ တောက်တိုမယ်ရ အကူအဖြစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။
သို့သော် ကကချုပ်ရုံးမှ ၁၉ လကျော်ကြာ စစ်ပွဲအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၁၆၅ သန်းအား အသုံးပြုပြီးကြောင်း ပြေစာရှင်းတမ်းအား သမ္မတရုံးသို့ တင်သွင်းပေးလိုက်သည်။ အကြောင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆရာကြီး ဦးအောင်မင်းအား ထိုငွေအားပြန်လည်ရှာပေးရန် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ တွင် ရာဇသံတခု ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ (နောင်တွင် ဗဟုအဖွဲနှင့် ဦးအောင်မင်းတို့ နော်ဝေ၊ သြစတေးလျှ နှင့် ဂျပန်၊အီးယူမှပေးသော ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်ပံ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀အကြောင်း ကျနော် တင်ပြပါမည်။)
၂၀၁၃ ဇန်နာဝရီလ ၄ ရက်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တပ်မတော်မှ စီစဉ်ပေးသော လွတ်လပ်ရေးနေ့အား အကျဉ်းရုံး စီစဉ်ပြီးနောက် ဇန်နာဝရီလ (၆) ရက်နေ့မှ လက်ဂျားယန်ဒေသသို့ အကြီးအကျယ်ဗုံးကျဲစစ်ဆင်ရေးစတော့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ သူမအနေဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ခံရလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပါဝင်ပတ်သက်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဇန်နာဝရီလ ၁၀ ၇က်နေ့တွင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သောကြောင့် စာရေးသူမှ ကေအိုင်ကေသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ ကေအိုင်အေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် တောင်းခံစာပေါင်း ၂၂ ခုအား ၂၀၁၂ ဇန်နာဝရီလမှစပြီး ၂၀၁၃ ဇန်နာဝရီလ (၂) ရက်နေ့အထိ ပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အခိုင်မာဆိုခဲ့သည်။
ထို့နောက် နောက်ဆုံး စစ်ရာဇသံတခု ထပ်မံထွက်လာသည် ၊ ဇန်နာဝရီလ ၁၂ ၇က်နေ့ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်း စစ်ရာဇသံသည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ၇က်နေ့မတိုင်ခင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင့် လှိုင်ဇာ အပြီးပြတ်သိမ်းရန် ဆိုထားသည်။ ပြည်ထောင်စုနေ့အား တောင်တန်းဒေသအတွက် လှိုင်ဇာတွင် ကျင်းပမည့်အကြောင်း ထည့်သွင်းထားခဲ့၏။
ရှေ့တန်းမှ ရဲဘော်နှင့် အရာ၇ှိများက ကကရုံးအား ဖေစုံမောင်စုံ တိုင်းထွာ ဆဲဆိုကြသည်ဟု ပေါ်တာအဖြစ် လိုက်ပါရသော ဗန်မော်မြို့သားတဦးမှ နောက်ပိုင်းတွင် သတင်းပေးပို့ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဇန်နာ)ရီလ၂၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်မှ ဟာဝိုင်ယီ (အမေ၇ိကန်ပြည်ထောင်စု) အား ထပ်မံခရီးစတင်သော နေ့သည် ကချင်တို့၏ ခါရာတောင်တန်းအား ဗုံးမိုး အကြီးမားဆုံး ရွာသွန်းဖြိုးခဲ့သောနေ့ ဖြစ်သည့်အပြင် ခါရာတောင်တန်း ဗုံး ဟောင်ဝေဇာ အမြောက်လှိုင်းအောင်တွင် ဇန်နာဝရီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးသွားခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ ၃၆၈ ယောက်သေဆုံးပြီး ၁၂၁၄ ယောက် ဒဏ်ရာရသော အဖြေထွက်ခဲ့ပြီး ကချင်ဘက်မှ ၄၆ ယောက်ကျဆုံးကာ ၂၃၃ ယောက် လှိုင်ဇာ ဆေးရုံရောက်သွားခဲ့၏။
ဖေဖေါ်ဝါ၇ီလ ၁ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာဝိုင်ယီမှ ရန်ကုန်သို့ ပြန်ရောက်ပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကကကြီးနှင့် နောက်ချန် လက်ပံတောင်းကော်မရှင်တို့ ရေးသားထားပြီးသော အစီရင်ခံစာအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံပြသခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အစီရင်ခံစားအား အသေခြာပင်မဖတ်တော့ပဲ သဘောတူလက်ခံခဲ့သည်ဟု ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှုး မှ ပြောသည်။
သို့သော်အစီရင်ခံစားထုတ်ပြန်ရန်အတွက် အကြီးအကျယ် စဉ်းစားရသော အခြေနေမှာ အစီရင်ခံစာပါအကြောင်းရာများ မဟုတ်ရပဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ညီလာခံအတွက် လုံခြုံရေး တည်ငြိမ်ရေးနှင့် အထမြောက် အေးချမ်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အား ဦးစားပေး စဉ်းစားခဲ့ကြပြီး ဒီချုပ်ညီလာခံ ပြီးမှသာလျှင် လက်ပံတောင်း အစီရင်ခံစားအား ထုတ်ပြန်ရန် နေပြည်တော်နှင့် တိုင်ပင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကို ဒီချုပ်မှ ငြင်းဆိုလျှင် ငြင်းဆိုသော သမိုင်းတရပ် ကျန်ရစ်ပေလိမ့်မည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော လက်ပံတောင်းကော်မရှင်မှ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရန် လုံခြုံရေး ထောက်လှမ်းရေးအစီစဉ်များအား ရဲချုပ်မှ တင်သွင်းသော မတ်လ ၈ ရက် ၂၁၀၃ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံခဲ့ပြီး မတ်လ ၁၂ ရက်တွင် ဂျာနယ်များသို့ပေးပိုပြီး ကော်မရှင် ဥက္ကဌမှ မတ်လ ၁၃ ရက် ကိုဖုန်းမော်ကျဆုံးသောနေ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်ရေးနေ့ဟု အတိုက်ခံတို့ဘက်မှ တောင်းဆိုထားသော နေ့တနေ့အား ပြက်ပြယ်ရန် ဦးအောင်မင်းနှင့် ဦးရွှေမန်း၊ ရဲချုပ်အား ခေါင်းကိုင်ထားသည့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ကိုကိုအပြင် ဦးခင်ရီပါသော အစည်းဝေး မတ်လ ၃ ၇က်နေ့တွင် အကျင်းရုံးနေပြည်တော်ဝယ် ပြုလုပ်ကာ တမင်သကာ ချမှတ်ပြီး အကွက်ဆင်၍ လုပ်ခဲ့ကြ၏။
မှတ်ချက် အပိုင်း(၅) နိဂုံးပိုင်းတွင် မိတ္ထီလာ အကြောင်း အဖြစ်မှန်နှင့် အကြံစည်များအား တင်ပြပေးပါမည်။
သား ၃ ယောက်တွင် ၂ ယောက်သည် မဟာဘောဂ စီးပွါးရေးသမားကြီးများဖြစ်ပြီး အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သူကတော့ ဘိုတော်ရောဂါထကာ အင်းအစီရင် ယာတြာနှင့် အဂိရ ဖိုထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်လေ၏။ ၄င်း၏ အ၈္ဂိရ ဖိုထိုးသောဒေသများသည် ယခု နေပြည်တော် မတည်ကပင် သွားရောက်စခန်းဝင်လေ့ ရှိခဲ့သော လယ်ဝေး ပျဉ်းမနား၏ အနောက်ဘက် တောင်တန်း တောတန်းများတွင် အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာလာခြင်းပင်လျှင် ဗိုလ်သန်းရွှေသားငယ်၏ ခေါင်းကိုင် ဘိုးတော် ဆရာမဲ (၉)မိုင်မှ ဓါတ်စီးခန်း ပြုလုပ်သည်။ ၄င်းတို့ ဘိုးတော် ဆရာ တပည့်နှစ်ယောက်လုံးက ဓါတ်စီးသောအချိန်တွင် တပ်မတော် အရာ၇ှိကြီးများနှင့် သူတို့၏ ကတော်များပါ တက်ရောက်မေးမြန်းကာ ယာတြာယူတတ်ကြသည်။
နောက်ဆုံးတွင် တိုင်းပြည်အား အမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရန် မြင်ကြောင်း ဘိုးတော်မဲမှ ဟောကြားကာ ယာတြာချေကြရမည့် အပိုင်းပါ ပါဝင်ပတ်သက်လာသည်။ မိန်းမ အုပ်ချုပ်မည်ဆိုသောကြောင့် မစာလုံး၏ ထိပ်စီးသို့မဟုတ် နောက်ပိတ်ဖြင့် ဆုံးသောမြို့ရွာများအား ရစ်ပူဇော်သကဲသို့ အထိကရုံးပြုလုပ်ပြီး နှိမ်နှင်းကွပ်ကဲရမည်ဟု ယာတြာပေးခဲ့သည်။
ထိုမြို့ရွာများအတွက် အထိကရုံန်းများဖြစ်ပေါ်ရန် ဒီပဲယင်း လက်သံပြောင် ဦးအောင်သောင်းနှင့် ဦးကျော်ဆန်း ( ယခု သမ) ၀န်ကြီးတို့အား ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နာဝရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်မှတာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ဦးအောင်သောင်းတို့၏ နောက်လိုက် ဦးခင်ရီနှင့် ဦးအောင်သိန်းလင်းတို့အပြင် အမာခံ ကြံ့ဖွတ်များ ၃၀ ကျော် ရှိပြီး ခရိုနီများပင် ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။(မှတ်ချက်) ဦးအောင်သိန်းလင်း ရန်ကုန်တိုင်းမြို့တော်ဝန် ကာလတွင် အလံပြောင်းလဲတင်သောနေ့တွင် စင်ကြယ်ဖိနပ် စီးနင်းကာ အလံတင်ကြောင်း အားလုံးသိပေလိမ့်မည်။ စင်ကြည်ဆိုသည်မှာ စုကြည်ဟု နံတူယူ ဆောင်ရွက်ကြောင်း သက်သေ အခိုင်မာ ရှိပါသည်။
ရခိုင်အရေးခင်း မပေါ်ပေါက်ခင်ကလေးမှာပင် ကျောက်နီမှော်ရွာမှ မသီတာထွေးမုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရသော ကာနှင့် တဆက်တည်းမှာပင် တရုတ်ဂစ်ပိုက်လိုင်း လုံခြုံရေးအတွက်နှင့် ယာတြာတို့အတွက်ပါ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ၁၀ဦးအား သတ်ဖြတ်လိုက်သောမြို့နယ်သည် မ နှင့်စသောမြို့ (၁)မောင်းတော ဖြစ်လေသည်။ထိုနောက် (၂)မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မင်္ဂလာဈေးအား မီးရှို့ပြာချလိုက်သည်။ ထိုနောက်(၃) မော်လမြိုင် ဈေးကြီးအား မီးလောင် ပြချကြပြန်သည်။ ထိုနောက်(၄) မြစ်ကြီးနား မိုင်ဂျားယန်ကို ထိုးစစ်ပြုလုပ်သည်။
ထိုနောက်(၅) မန္တလေး တိုင်းတွင် တရုတ်တဦးက မြန်မာ အမျိုးသားတဦးအားလက်သီးနှင့် ထိုးကြိတ်သော ပြသနာ လုပ်ပြပြီး ထိန်းကွပ်ပြသသည်။ ထိုနောက် (၆)မုံရွာ လက်ပံတောင်း အရေးခင်း အစပျိုးရန် ဦးအောင်မင်းတို့မှ အကြောင်းမဲ့သွားရောက်က တရုတ်ကြေးဇူး ဆပ်ရမည်ဟု မီးစထိုးလိုက်သည်။ ထိုနောက်(၇) မအူပင်မြို့နယ် မလက်တိုရွာ အေ၇းခင်း ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက်(၈) မိတ္ထီလာမြို့ အထိကရုံန်းဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက် (၉)မလှိုင်မြို့တွင် နေခင်းကြောင်တောင် အကြမ်းဖက်မှုပြုလုပ်ပြသည်။ ထိုနောက်(၁၀) မင်းလှတွင် ထပ်မံအကြမ်းဖက်မှု လုပ်ကြပြန်သည်။ မင်းလှ အကြမ်းဖက်မှုပြီးမှသာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ မိတ်ခွန်း မတ်လ (၂၈)တွင်ထွက်လာခဲ့တော့သည်။
မိတ္တီလာ အရေးခင်းအား ဖေါ်ပြရပါမူ ရွှေဆိုင်တဆိုင်မှ အရောင်းဝယ်ကြောင့် ပြသနာစဖြစ်သည်ဟု အကြမ်းမျဉ်းနားလည်ကြသည်။ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ၄င်း မတ်လ ၂၀ ရက် နေ့ခင်း ၁၂ နာရီး ၂၀ တွင်မှာပင် သံဃာတော်တပါးအား ဓါတ်ဖြင့်ခုန်ကာ မီးရှို့ရန် လုပ်သော မူဆလင်ရပ်ကွက်တခုက ထပ်ဖြစ်လာသည်ဟု ဖေါ်ပြကြပြန်သည်။ ထိုနောက် တစတစ ရန်မီးကြီးထွားလာခဲ့ပြီး မိထ္တီလာ အထီးကရုံန်း ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
အမှန်တင်ပြရသော မိထ္တီလာမြို့သို့ ဇန်နာဝရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဦးသန်းရွှေ၏ ဒုတိယသမီး ရောက်ခဲ့သည်။ သူမ မိထ္တီလာသို့ ရောက်သော အချိန်သည် ည ၉ နာရီခန့်ရှိပြီး မိတ္ထီလာ တပ်မတော်သားများမှ အကြီးကအကျယ်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့ရပြီး မိထ္တီလာမြို့အား အသေခြာ ပတ်ပတ်လည် နှစ်ခေါက်တိတိ လှည့်ပတ်ကြည့်ရှု့သည်။ ဦးသန်းရွှေ၏ သမီးနှစ်က မိထ္တီလာမြို့၏ အချက်ခြာကျသော နေရာများအား လက်ညိုးထိုးပြသည်ဟုဆိုသည်။ ၄င်းတို့တွင် ကြီးမားသော စီမံကိန်းကြီးတရပ် အကောင်ထည်ဖေါ်ရန် အစီစဉ်ရှိခဲ့ကြသည်။ မိတ္ထီလာ သည် မန္တလေးထက်ပင် အချက်ခြာကျသော နေရာဟု နေပြည်တော် စီပွါးရေးသမားခရိုနီများက သွားရည်ကျနေသည်မှာ ကြာလေပြီ၊ မိတ္ထီလာသည် မိုးအလွန်ခေါင်သော နေရာမျိုး မဟုတ်ပဲ စီးပွါးရေးဇုန်ကြီးတခု အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဟု ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ မိတ္ထီလာတွင် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးများ အခြေခြရာဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင် တပ်ရင်းများနှင့် ဆေးဘက် စစ်ပစ္စည်းဘက် ထောက်ပို့ရေး အပါဝင် တပ်ရင်းဌာနပေါင်း ၁၅ ခုရှိသောမြို့လဲဖြစ်ပြီး တပ်မတော် အရာ၇ှိကြီးများအဖို့ စီးပွါးရေး စစ်ရေး များအတွက်လဲ အလွန်အရေးပါကြောင်း မှတ်ချက်ချပြီး တပ်ချုပ်ဟောင်းကြီး သမီးမြှ ဇန်နာ၀၇ီလ ၁၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁ နာ၇ီတွင် နေပြည်တော်သို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။
၄င်းပြန်သွားပြီး နောက်မိတ္ထီလာသို့ စစ်အရာရှိကြီးများ မကြာခဏသွားရောက်နေခဲ့ကြသည်။ မြို့လယ်ခေါင်နေရာကောင်းများအား ကုလားများကသာ နေရာယူထားကြောင်းကောက်ချက်ချသည်။
၄င်းတို့ ကောက်ချက်ချပြီးမကြာမှီမှာပင် ဆရာတော် ဝေရသူ၏ မူဆလင်ဘာသာဝင်များ မိတ္ထီလာတွင် မည်မျှနေရာယူထားကြောင်း တိုက်ရိုက်ထောက်ပြသော တရားပွဲ လွတ်လပ်စွာ ထွက်ပေါ်လာသည်။ တိုက်ဆိုင်မှုလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကပင် စစ်ထောက်လှမ်းရေးအပါဝင် ဦးအောင်သောင်းတို့နှင့် ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်ခဲ့လေသော ဆရာတော် ဝေရသူ အား ၂၀၀၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပြီး ထိုနောက် ထောင်မှ လွတ်လာသော ဆရာတော်ဝေရသုအား ပထမဆုံး သွားရောက်တွေ့ဆုံသူနေပြည်တော် အကြီးကဲပိုင်းများထဲတွင် ဦးအောင်သေား ထို့နောက် ဦးခင်ညွန့်တို့ ဖြစ်နေခဲ့သည်။
မိတ္ထီလာအထိကရုန်း စဖြင့်သော အချိန်တွင် နယ်ထိန်း ဒုရဲအုပ် ၀င်းမောင်မှ သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားသည်။ သို့သော် ဆက်လက်တင်ပြပေးလိုက်မည် အခြေနေကိုသာ အသေးစိတ်စောင့်ကြည့်ရန် ညွန်ကြားသည်ဟု ၄င်းက ဆိုသသည်။ ညနေရောက်လုလုတွင် ကြီးကြီးမားမား လူအုပ်ကြီးများဖြစ်လာခဲ့ပြီး မီးတင်ရှို့သော ဇာတ်လမ်းများဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ ၄င်းဒေသတွင်းမှ ရဲအင်အား ၁၅၀ ခန့် လက်နက်အပြည့်စုံဖြင့် လမ်းပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ပေးပြီးဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက် မရှိကြတော့ပဲ ပိတ်မိသူက ပိတ်မိကာ သတ်ပွဲများ တညလုံးကျင်ပနေခဲ့ကြသည်။
အာရုံဦးရောက်ခါနီးမှပင် အဆိုပါ အချက်ခြာကျသောနေရာများသည် ပြာကျကုန်သလောက်ဖြစ်သည့်အပြင် အချို့နေရာများတွင်ပင် ထပ်မံမီးတင်ရှို့နေသော အဖြစ်ပျက်များ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေလေသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်သည် အဘယ်ကြောင့်ဆက်တိုက်ဖြစ်ခွင့်ပေးထားသနည်းဟု စုံစမ်းသောအခါ ရဲများသည် မိတ္ထီလာ တပ်ချုပ်ကြီး၏ အမိန့်ကို စောင့်ဆိုင်းကိုင်တွယ်ရသည်ဟု ခိုင်လုံစွာသတင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
အထူးဆန်းဆုံး ဖြစ်ရပ်ဆန်းမှာ မိတ္ထီလာတွင် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် မာရှယ်လောကြေငြာပြီးနောက် အခြားမြို့များသို့ ဆက်လက်ကူးစက် ဖြစ်ပွားခွင့်ပြုခဲ့သည်။ လာရောက်အကြမ်းဖက်သူများသည် နယ်ခံများမဟုတ်ကြပဲ မျက်နှာစိမ်းများဟု ဒေသခံများက ခိုင်လုံစွာပြောခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာ မိတ္ထီလာ ၀န်းကျင် တွင် တပ်သားသစ် စုဆောင်းရေးဌာန ၈ ခုရှိပြီး စစ်သားသစ် သင်တန်း ၅ ခုတောင်ရှိနေခဲ့သည်။
၄င်းတို့ဌာနများနှင့် တပ်သားသစ်များအာ ညအချိန် ခရာမှုတ်ကာ လူစုပြီး ကုမ္မဏီများပိုင်သော မြေသယ်ကားကြီးများဖြင့် ခေါ်ဆောင်လာပြီး အလျှင်မြန်ဖျက်ဆီစေသော သတင်းမှာ အပြင်သို့ ပေါက်ထွက်ေ၇ာက်ရှိလာခြင်း မရှိသေးကြောင်း တင်ပြရင်း အကြမ်းဖက်အထိရုံန်း လက်သယ်ဘယ်သူလဲ? ဖေါ်လိုက်ပြီ ဆောင်းပါးအား အသေခြာ ဖတ်ရှု့ပါက ရှင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါကြောင်း……………………….
မှတ်ချက် ( မည်သည့် ဘာသာရေးဘက်မှ မိမိအနေဖြင့် လိုက်ကာ တင်ပြထားခြင်းမဟုတ်ပဲ မိမိရရှိခဲ့သော သတင်းအချက်လက် မှတ်တမ်းများ နှင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဘက်မလိုက်ပဲ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သူများ၏ အကူညီများဖြင့် တိကျစွာ တင်ပြခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံပါသည်)
စာဖတ်သူအပေါင်း စစ်ဘီလူးများ ဖန်တီးလှည့်ပြားသော ဘေးအန္တရယ် လှည့်ကွက် အသွယ်သွယ်မှ ကင်းဝေနိုင်ကြပါစေ။
Posted by myu shadan at 7:09 PM